Madaxweyne Farmaajo oo maanta furay shirka guddiga sare ee jaamacadda umadda (SAWIRO) – Bulshoweyn.com | Your Source Of News And Entertainment
Madaxweyne Farmaajo oo maanta furay shirka guddiga sare ee jaamacadda umadda (SAWIRO)
Madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed C/laahi Farmaajo ayaa maanta furay shirka guddiga sare ee jaamacadda umadda oo ka dhacay xarunta Gaheyr ee magaalada Muqdisho, isagoo sidoo kale kormeer ku sameeyay qeybaha kala duwan ee xarunta.
Shirkaan oo ay ka qeyb-galeen xubnaha guddiga sare oo uu guddoomiye sharafeed u yahay madaxweyne Farmaajo, ayna xubno ka yihiin wasiiro ka tirsan dowladda federaalka iyo maamulka Jaamacadda ayaa lagu go’aamiyay in sanadkan waxbarasho bilaash ah loo fidiyo arday kor u dhaafeysa kun oo ka kala imaan doona dhammaan gobolada dalka.
Madaxweyne Farmaajo ayaa tilmaamay ahmiyadda ay leedahay in xarunta jaamacadda dib loogu soo celiyo gacanta dowladda kadib 10 sano oo ay xero ciidan ahayd.
“Waxaan aamisanahay inay tahay horumar inay nagu soo wareegtay dhismihii jamaacadda oo aan ku dhiiri-gelino ciidamada Burundi inay ka guuraan maadaama ay meeshan tahay goob waxbarasho, anagana aan isku tashanno oo aan halkaan uga shaqeeyno mustaqbalka caruurteena, waxaan ku ballanay inaan dib u dhisanno jaamacaddeena.” Sidaas waxaa yiri madaxweyne Farmaajo.
Dhinaca kale, madaxweyne Farmaajo ayaa sheegay in dowladdu ay korhdineeyso miisaaniyadda Jaamacadda, si dhalinyarada Soomaaliyeed ay u helaan adeeg waxbarasho oo hufan.
Waxa uu intaas raaciyay in shacabka Soomaaliyeed looga baahan-yahay inay isku tashadaan oo ay maalgelin ku sameeyaan tacliinta si loo helo jiil ka caafimaad qaba qabyaaladda iyo xagjirnimada.
Jaamacadda oo dib loo howlgeliyay sanadkii 2013 waxay haatan ka kooban tahay 10 kulliyadood iyada oo waxbarasho bilaash ah u fidisa arday kor u dhaafeysa 1,500 oo ka kala yimid dhammaan gobolada dalka.